ဖြေရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ အရာတွေနဲ့ ကြုံလာခဲ့ရင် ဒီအကြောင်းအရာလေးကို သတိရပါ... - Barnyar Barnyar
ဖြေရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ အရာတွေနဲ့ ကြုံလာခဲ့ရင် ဒီအကြောင်းအရာလေးကို သတိရပါ…
တစ်ခါတုန်းက ကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးဟာ သူဌေးကြီးတစ်ဦးဆီကနေ ချေးယူထားတဲ့ ငွေတွေကို ပြန်မဆပ်နိင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခက်တွေ့လို့နေပါတယ်။ သူဌေးကြီးက ကုန်သည်ကြီးရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်သူကို တိတ်တခိုး သဘောကျနေသူဖြစ်ပြီး အခုလိုအခက်အခဲ ကြုံနေတဲ့အချိန်ကို အခွင့်ကောင်းရယူကာ ကုန်သည်ကြီးရဲ့ သမီးဖြစ်သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒါကို ကုန်သည်ကြီးရော သမီးဖြစ်တဲ့သူရော လက်မခံကြဘဲ ငြင်းဆိုကြတဲ့ အခါမှာတော့ သူဌေးကြီးက ” ဒါဆို ငါတို့ သဘောတူညီမှုတစ်ခု လုပ်ကြရအောင်။ ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲပုံကြီးထဲကနေ ကျောက်စရစ်အဖြူလေးတစ်ခဲနဲ့ အနက်ရောင်ကျောက်စရစ်ခဲလေးတစ်ခဲကို အိတ်တစ်အိတ်ထဲ ထည့်လိုက်မယ်။
ပြီးရင် သင့်ရဲ့သမီးကို အိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကျောက်စရစ်နှစ်ခဲထဲက တစ်ခဲကို ကောက်ခိုင်းမယ်။ သင့်ရဲ့ သမီးက အနက်ရောင်ကျောက်စရစ်ခဲလေးကို ကောက်ခဲ့မိရင် ငါလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာကို လက်ခံရမယ်။ ငါ့အပေါ်မှာ တင်နေတဲ့ ကြွေးမှီတွေကိုလည်း ပြန်ဆပ်စရာ မလိုတော့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ တကယ်လို့သာ အဖြူရောင်ကျောက်စရစ်ခဲလေးကို ကောက်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ အကြွေးတွေလည်း ဆပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ငါ့ကိုလည်း လက်ထပ်စရာ မလိုတော့ဘူး ” လို့ပြောပြီး သူဌေးကြီးဟာ အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ ကျောက်စရစ်ပုံကြီးထဲကနေ ကျောက်စရစ်ခဲလေးနှစ်လုံးကို ကောက်ယူပြီး အိတ်လေးထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။
သူဌေးကြီးက ကျောက်စရစ်လေးထည့်ထားတဲ့ အိတ်လေးကို ယူလာခဲ့ပြီး ကုန်သည်ကြီးရဲ့သမီးကို ရွေးချယ်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်… ဒါပေမဲ့ သူဌေးကြီးကောက်ယူပြီးထည့်လိုက်တဲ့ ကျောက်စရစ်နှစ်ခဲလုံးက အနက်ရောင် ကျောက်စရစ်တွေပဲ ဖြစ်နေတာကို ကုန်သည်ကြီးရဲ့သမီးက လှမ်းမြင်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်သူဌေးကြီးက ကျောက်စရစ်လေးထည့်ထားတဲ့ အိတ်လေးကို ယူလာခဲ့ပြီး ကုန်သည်ကြီးရဲ့သမီးကို ရွေးချယ်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ မိန်းကလေးဟာ သူဌေးကြီးကမ်းပေးတဲ့ အိတ်ထဲက ကျောက်စရစ်ခဲလေးတစ်ခဲကို နှိုက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အဖြူလား အနက်လား ကြည့်မနေတော့ဘဲ အနီးနားမှာရှိတဲ့ ကျောက်စရစ်ပုံကြီးထဲကို လှမ်းပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
သူဋ္ဌေးကြီးက“ဟာ… မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ “လို့ ဆိုလိုက်တဲ့အခါ ” ကျွန်မကောက်ယူလိုက်တဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲလေးကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပေမဲ့ ဒီအိတ်ထဲမှာ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတစ်ခဲ ကျန်နေပါသေးတယ်။
အဲဒီအတွက် အဖြေရှာဖို့ မခက်ခဲပါဘူး သူဌေးမင်း” လို့ ပြန်ပြောပီး ကျန်ရှိနေတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲလေးကို ကောက်ယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…. အနက်ရောင်ကျောက်စရစ်လေး ဖြစ်နေတာကြောင့် မိန်းကလေးက ” သူဌေးမင်း ဒီမှာကျန်ရှိနေတာက ကျောက်စရစ်ခဲ အနက်ရောင်လေးပဲ။
ဒါကြောင့် ကျွန်မပစ်လိုက်တာက အဖြူရောင် ကျောက်စရစ်ခဲလေးပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် သူဌေးမင်းပြောထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်မ သူဌေးမင်းကို လက်ထပ်စရာ မလိုတော့သလို ကျွန်မအဖေကျန်ရှိနေတဲ့ အကြွေးတွေကိုလည်း ပြန်ဆပ်ဖို့ မလိုတော့ဘူးနော်။
သူဌေးမင်း စကားတည်ပါစေ” လို့ပြောပြီး သားအဖနှစ်ယောက် ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အိမ်ပြန်လမ်း လှပခဲ့ရပေမဲ့ သူဌေးကြီးကတော့ သူ့ရဲ့မမှန်မကန် လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေကြောင့် ဘာကိုမှ စောဒကမတက်နိင်တော့ဘဲ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ကျန်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
ဒီအကြောင်းအရာလေးကနေပေးချင်တဲ့ အသိကတော့ ပြဿနာတစ်ခု ဖြေရှင်းရတဲ့အခါ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို တတ်နိင်သလောက် လျော့ချပါ။
ပြီးရင် သမရိုးကျနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ အဆင်မပြေတဲ့ အခါမျိုးမှာ ခွဲထွက်စဉ်းစားပါ။ ခွဲထွက်စဉ်းစားခြင်းက ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနိင်ရုံသာမက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်တဲ့ အခါမှာလည်း အသုံးဝင်ပါသေးတယ်။ မြင်နေကြ တွေ့နေကြ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ ခွဲထွက်စဉ်းစားခြင်းက သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လူသိများစေနိုင်ပြီး အောင်မြင်စေနိင်ပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပြဿနာတွေအားလုံးအတွက် အဖြေရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ သမရိုးကျအတွေးတွေ ဖြေရှင်းနည်းတွေထက် ဖောက်ထွက်ဖြန့်ကျက် စဉ်းစားတတ်ဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ။
ဖွရှေငျးဖို့ခကျခဲတဲ့ အရာတှနေဲ့ ကွုံလာခဲ့ရငျ ဒီအကွောငျးအရာလေးကို သတိရပါ…
တဈခါတုနျးက ကုနျသညျကွီးတဈဦးဟာ သူဌေးကွီးတဈဦးဆီကနေ ခြေးယူထားတဲ့ ငှတှေကေို ပွနျမဆပျနိငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ အခကျတှလေို့နပေါတယျ။ သူဌေးကွီးက ကုနျသညျကွီးရဲ့ တဈဦးတညျးသော သမီးဖွဈသူကို တိတျတခိုး သဘောကနြသေူဖွဈပွီး အခုလိုအခကျအခဲ ကွုံနတေဲ့အခြိနျကို အခှငျ့ကောငျးရယူကာ ကုနျသညျကွီးရဲ့ သမီးဖွဈသူ့ကို လကျထပျဖို့ တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။
ဒါကို ကုနျသညျကွီးရော သမီးဖွဈတဲ့သူရော လကျမခံကွဘဲ ငွငျးဆိုကွတဲ့ အခါမှာတော့ သူဌေးကွီးက ” ဒါဆို ငါတို့ သဘောတူညီမှုတဈခု လုပျကွရအောငျ။ ဟိုမှာမွငျနရေတဲ့ ကြောကျစရဈခဲပုံကွီးထဲကနေ ကြောကျစရဈအဖွူလေးတဈခဲနဲ့ အနကျရောငျကြောကျစရဈခဲလေးတဈခဲကို အိတျတဈအိတျထဲ ထညျ့လိုကျမယျ။
ပွီးရငျ သငျ့ရဲ့သမီးကို အိတျထဲမှာရှိနတေဲ့ ကြောကျစရဈနှဈခဲထဲက တဈခဲကို ကောကျခိုငျးမယျ။ သငျ့ရဲ့ သမီးက အနကျရောငျကြောကျစရဈခဲလေးကို ကောကျခဲ့မိရငျ ငါလကျထပျခှငျ့တောငျးတာကို လကျခံရမယျ။ ငါ့အပျေါမှာ တငျနတေဲ့ ကွှေးမှီတှကေိုလညျး ပွနျဆပျစရာ မလိုတော့ဘူး။
ဒါပမေဲ့ တကယျလို့သာ အဖွူရောငျကြောကျစရဈခဲလေးကို ကောကျလိုကျမိတယျဆိုရငျတော့ အကွှေးတှလေညျး ဆပျစရာမလိုတော့ဘူး။ ငါ့ကိုလညျး လကျထပျစရာ မလိုတော့ဘူး ” လို့ပွောပွီး သူဌေးကွီးဟာ အနီးနားမှာရှိနတေဲ့ ကြောကျစရဈပုံကွီးထဲကနေ ကြောကျစရဈခဲလေးနှဈလုံးကို ကောကျယူပွီး အိတျလေးထဲကို ထညျ့လိုကျပါတယျ။
သူဌေးကွီးက ကြောကျစရဈလေးထညျ့ထားတဲ့ အိတျလေးကို ယူလာခဲ့ပွီး ကုနျသညျကွီးရဲ့သမီးကို ရှေးခယျြပေးဖို့ ပွောပါတယျ… ဒါပမေဲ့ သူဌေးကွီးကောကျယူပွီးထညျ့လိုကျတဲ့ ကြောကျစရဈနှဈခဲလုံးက အနကျရောငျ ကြောကျစရဈတှပေဲ ဖွဈနတောကို ကုနျသညျကွီးရဲ့သမီးက လှမျးမွငျလိုကျပါတယျ။
အဲဒီနောကျသူဌေးကွီးက ကြောကျစရဈလေးထညျ့ထားတဲ့ အိတျလေးကို ယူလာခဲ့ပွီး ကုနျသညျကွီးရဲ့သမီးကို ရှေးခယျြပေးဖို့ပွောပါတယျ။ မိနျးကလေးဟာ သူဌေးကွီးကမျးပေးတဲ့ အိတျထဲက ကြောကျစရဈခဲလေးတဈခဲကို နှိုကျလိုကျပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ အဖွူလား အနကျလား ကွညျ့မနတေော့ဘဲ အနီးနားမှာရှိတဲ့ ကြောကျစရဈပုံကွီးထဲကို လှမျးပဈလိုကျပါတော့တယျ။
သူဋ်ဌေးကွီးက“ဟာ… မငျးဘယျလိုလုပျလိုကျတာလဲ “လို့ ဆိုလိုကျတဲ့အခါ ” ကြှနျမကောကျယူလိုကျတဲ့ ကြောကျစရဈခဲလေးကို လှငျ့ပဈလိုကျပမေဲ့ ဒီအိတျထဲမှာ ကြောကျစရဈခဲလေးတဈခဲ ကနျြနပေါသေးတယျ။
အဲဒီအတှကျ အဖွရှောဖို့ မခကျခဲပါဘူး သူဌေးမငျး” လို့ ပွနျပွောပီး ကနျြရှိနတေဲ့ ကြောကျစရဈခဲလေးကို ကောကျယူကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ…. အနကျရောငျကြောကျစရဈလေး ဖွဈနတောကွောငျ့ မိနျးကလေးက ” သူဌေးမငျး ဒီမှာကနျြရှိနတောက ကြောကျစရဈခဲ အနကျရောငျလေးပဲ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျမပဈလိုကျတာက အဖွူရောငျ ကြောကျစရဈခဲလေးပဲ ဖွဈရမယျ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ သူဌေးမငျးပွောထားတဲ့အတိုငျး ကြှနျမ သူဌေးမငျးကို လကျထပျစရာ မလိုတော့သလို ကြှနျမအဖကေနျြရှိနတေဲ့ အကွှေးတှကေိုလညျး ပွနျဆပျဖို့ မလိုတော့ဘူးနျော။
သူဌေးမငျး စကားတညျပါစေ” လို့ပွောပွီး သားအဖနှဈယောကျ ပြျောရှငျစှာနဲ့ အိမျပွနျလမျး လှပခဲ့ရပမေဲ့ သူဌေးကွီးကတော့ သူ့ရဲ့မမှနျမကနျ လုပျကွံဖနျတီးမှုတှကွေောငျ့ ဘာကိုမှ စောဒကမတကျနိငျတော့ဘဲ ပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့ ကနျြခဲ့ရပါတော့တယျ။
ဒီအကွောငျးအရာလေးကနပေေးခငျြတဲ့ အသိကတော့ ပွဿနာတဈခု ဖွရှေငျးရတဲ့အခါ စိုးရိမျပူပနျမှုတှကေို တတျနိငျသလောကျ လြော့ခပြါ။
ပွီးရငျ သမရိုးကနြညျးလမျးတှနေဲ့ ဖွရှေငျးလို့ အဆငျမပွတေဲ့ အခါမြိုးမှာ ခှဲထှကျစဉျးစားပါ။ ခှဲထှကျစဉျးစားခွငျးက ပွဿနာတှေ ဖွရှေငျးနိငျရုံသာမက စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ လုပျကိုငျတဲ့ အခါမှာလညျး အသုံးဝငျပါသေးတယျ။ မွငျနကွေ တှနေ့ကွေ ပုံစံမြိုးမဟုတျဘဲ ခှဲထှကျစဉျးစားခွငျးက သငျ့ရဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျးကို လူသိမြားစနေိုငျပွီး အောငျမွငျစနေိငျပါတယျ။
ရှုပျထှေးတဲ့ ပွဿနာတှအေားလုံးအတှကျ အဖွရှေိပါတယျ။ တကယျတော့ သမရိုးကအြတှေးတှေ ဖွရှေငျးနညျးတှထေကျ ဖောကျထှကျဖွနျ့ကကျြ စဉျးစားတတျဖို့ပဲ လိုအပျတာပါ။